Awulungile, Nazi Izizathu Ezi-4 Zokuthi Imithombo Yezokuxhumana Ithinte I-SEO | Martech Zone
NgoLwesine, Januwari 8, 2015 Douglas Karr
Singakwazi ukuyibeka le mpikiswano? Kubonakala kimi ukuthi kukhona abanye ochwepheshe ngaphandle lapho abasebenzisa kabi imithombo yezokuxhumana ngaphandle kokuqonda ngokuphelele umthelela wayo. Okomphakathi kuyindlela yokwenyusa eyakha bobabili ubumbano lomkhiqizo futhi ikunikeze ukuvezwa kwezethameli ezibanzi. Angifuni ukubangenisa bonke, kepha kubonakala sengathi umsindo omkhulu uvela kubachwepheshe be-SEO - abangafisi nje ukwabelana ngesabelomali nabezindaba zenhlalo. Kuyindida ukuthi bazenzela kabi kakhulu.
Eqinisweni, lokhu okuthunyelwe kuyisibonelo esihle. Nginokusethwa kwezixwayiso zomphakathi kuwebhu yonke ukusithumela i-imeyili uma kunokushiwo okuthile ngabathengisi, imigomo nobuchwepheshe ukuze sikwazi ukubhala ngabo. Ngibukeza lawo masayithi futhi ngivame ukugcina lokho okuqukethwe kubalandeli bethu. Kulokhu, i-infographic engezansi ayitholakalanga kwesinye salezi zixwayiso. Kepha ngenkathi ngifunda enye i-athikili kusayithi, ukubuka kuqala kwe-infographic engezansi kukhonjiswe engxenyeni yokuthunyelwe ehlobene. Ngabe sengifunda i-infographic futhi ngicabanga ukuthi kuhle. Ngibe sengibuyela kuGoogle ukuyocwaninga ngomthombo we-infographic Ukuhanjiswa kwe-SMO, futhi ngathola i-infographic, I-SEO ne-Social Media kuthinta kanjani i-Website Ranking yakho?.
Ngakho-ke, imizamo yezenhlalo ye-Submitedge SMO yokuqhakambisa i-infographic yayo ngokungaqondile iholele ekutheni ngibakhuthaze futhi nginikeze i-backlink ekhasini labo ngesihloko esithile kwi-bailiwick yabo. Ukuqhuma! Ukube bebengabelani ngemizamo yabo ezinkundleni zokuxhumana, bengingeke ngibathole! Ukungakhulumi ngeqiniso lokuthi uma bengazange babekwe ohlwini kunoma yiliphi igama elihlotshaniswa nale infographic, ayikho enye indlela ebengingabathola ngayo.
Izinga lakho lewebhusayithi lincike ngokuphelele kwi-SEO naku-Social Media. Zombili lezi zici zifana nezinyawo ezimbili ezisiza iwebhusayithi ukuthi iqhubekele phambili igxathu negxathu. Kodwa-ke, izikhombisi ezishiwo ngezansi zizokwazisa izinzuzo zeSocial Media ne-SEO emazingeni akho.
I-SEO ne-Social Media kuthinta kanjani i-Website Ranking yakho?
Xhumanisa Okungenzeka - isibonelo sami esingenhla siwubufakazi obuphelele bokuthi lokhu kuyasebenza. Ukusabalalisa umhlaba ngokwenhlalo kuthuthukisa okuqukethwe kwakho kuzithameli ezibanzi kakhulu, kukhulisa amathuba okuthi kuzokwabiwa ngabanye. Futhi uma kuyi-infographic, kungenzeka ukuthi wandise amathuba akho kakhulu!
Ukwenza okuthandwa nguwe - Bengingakaze ngicabange ngalokhu kepha njengoba imiphumela yosesho yenziwe yaba ngeyomuntu noma ngubani ongene ngemvume ku-Google, futhi yenzelwe wonke umuntu okungeyona eyakhe, lokhu kuyehluka ngemiphumela uqobo eyethulwa kumseshi ngamunye. Abasebenzisi abazibandakanye nomphakathi bakha iphrofayili eyenziwe yaba ngeyakho futhi leyo miphumela ingafanisa imizamo yakho - ikunikeze ngokubonakala okwandisiwe, okucacisiwe.
Ivolumu Yombuzo Wosesho - Futhi, ukuphuma lapho emhlabeni wezenhlalo kwakha ukwethembeka kwemikhiqizo yakho, igunya, nokusondelana. Qala ukuthola i-logo yakho noma ubuso bakho kuzithameli ezibanzi futhi ukuqashelwa kuzothuthukisa abathengi kuwe. Le bhulogi kanye nomug wami omubi uyisibonelo esihle! Kungakho ubuso bami busendaweni yonke - noma ngabe uyathanda noma cha;).
Izimpawu zomkhiqizo - Ngezinguquko zakamuva ze-algorithm nentuthuko ku-algorithm yakwaGoogle, ngikholwa ukuthi izinzuzo eziningi ze-SEO zesikole ezindala zibukela phansi umthelela wezingcaphuno ekuqinisekiseni ukubaluleka kwezixhumanisi futhi; ekugcineni, usezingeni. Igama lakho lomkhiqizo, igama lomkhiqizo, amagama abasebenzi, amakheli nezinombolo zocingo konke kuyizinto ezihlukile zedatha. Ukuzikhipha lapho kuzo zonke izingosi zenhlalo kuqinisekisa ubukhona bakho negunya lakho.
Kuyathakazelisa kimi ukuthi ochwepheshe besimanje bosesho bathumela okuqukethwe futhi basebenzela ukwenza lokho okuqukethwe kuboniswe kumasayithi wemidiya atholakele futhi aphethwe. Bakwenza kanjani lokho? Imvamisa ngokusebenzisa amasu obudlelwano bomphakathi. Cabanga ngalokho… basebenzisa imizamo yezenhlalo ukukhulisa ukuthi kungenzeka ukuthi izixhumanisi zenziwe kokuqukethwe okubhalwe ngqo noma okwabiwe ngamasayithi anethonya. Hmmm… akunakwenzeka lokho ngemithombo yezokuxhumana? Yebo, yebo kunjalo.
Tags: nomthelela kwezenhlaloukusebenzisa ngokugcwele injinicinga amasu wokumakethasimo sokucingasesha vs ezenhlaloseoseo nezenhlaloamasu seoseo vs socialkwezenhlalo nokuseshaezenhlalo kanye seoumthelela kwezenhlaloamasu ezokuxhumana nabantuamasu omphakathikwezenhlalo kuqhathaniswa seoezomphakathi vs seoukuhanjiswa kweSmo
Jan 8, 2015 ngo-5: 17 PM
Kuhle omunye uDoug. Lokho kusho, ngicabanga ukuthi uphikisana nemibono emibili eyehlukene kwi-social re SEO (futhi ngiyazi ukuthi awuyona ngempela kodwa yibhulogi ngakho-ke ake sibe nenkulumompikiswano. Zenzelwe ini okunye?):
1. Umsebenzi wezenhlalakahle ungaholela ezintweni eziyizici ezisezingeni
2. Umsebenzi womphakathi "uyisici sezinga"
Ngivumelana no- # 1. Angivumelani no- # 2 ngaphandle komsebenzi othile we-Google + onqenqemeni kakhulu.
Jan 8, 2015 ngo-5: 23 PM
Ngiyavuma impela Andrew! Bekufanele ngikucacise lokho kokuthunyelwe kwami. I-IMO, uma ungasebenzi kwimizamo yakho yezenhlalo, kwenza ukukala kube nzima kakhulu. I-IMO kufanele ube nekhono kukho kokubili.
Jan 9, 2015 ngo-1: 51 PM
Yebo ungumpetha wokuchofoza it
Jan 9, 2015 ngo-4: 35 PM
Ngokwethembeka bekungeyona inhloso yami, kepha ngizoyithatha!